Luoyang Forge Tungsten-အပင်းများ၏ပစ္စည်း Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
အတု tungsten molybdenum
MOLYBDENUM silicon သတ္တုစပ်
သိပ်သည်းဆမြင့် tungsten သတ္တုစပ်
tungsten carbide အလွိုင်း
Forge တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်သတ္တုတစ်ခုကောင်းကောင်းသိထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း 20 '' အတွေ့အကြုံနှင့် 100 ကျော်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့အတူကျနော်တို့ဿုံ molybdenum, အဖြိုက်နက်, တမ်တာလမ်နှင့်နီအိုဘီယမ်၏အပြုအမူများနှင့်စွမ်းရည်များနားလည်ပါသည်။ သည်အခြားသတ္တုနှင့်ကြွေပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်တှငျကြှနျုပျတို့တိကျစွာသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များသတ္တုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ပင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုစဉ်နှင့် applications များအတွက်ကုန်ကြမ်းများ၏အပြုအမူတူအောင်ဖန်တီး, ဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များဆန်းစစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကောက်ယူကွန်ကရစ်စမ်းသပ်မှုတွေ၌အကြှနျုပျတို့၏ကောက်ချက်စမ်းသပ်ရန်။ ကျနော်တို့တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဦးဆောင် Research Institute များနှင့်တက္ကသိုလ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင်ပါဝင်ရန်။
ကျနော်တို့သာထိပ်တန်းအရည်အသွေးသည်ကယ်တင်တတ်၏။ ဒါကအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများက shared အခြေခံအတွေးအခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုအဖွဲ့ကဤအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေများဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ရလဒ်ပါရှိသည်။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်န်ထမ်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆီသို့ဦးတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်နားလည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အထူးသင့်ရဲ့ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ကြောင်းထိပ်တန်းအရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်တကွသင်ထောက်ပံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံပါသည်။ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျနော်တို့ကုန်ကြမ်းနှင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုလမ်းအတွက်သတိထားဖြစ်ကြသည်။
1. Metallography: သတ္တုပစ္စည်းများ၏ microstructure ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ဖော်ပြချက်, အလင်း-optical microscopy ၏အသုံးပြုမှု, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အီလက်ထရွန် microscopy, စွမ်းအင်စွန့်ကြဲ (EDX) နှင့်လှိုင်းအလျားစွန့်ကြဲ (WDX) X-Ray လေ့လာဆန်းစစ်။
2. က Non-ဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်း: Visual စစ်ဆေးခြင်း, ဆိုးဆေးထိုးဖောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်း, သံလိုက်အမှုန့်စမ်းသပ်ခြင်း, ultrasonic စမ်းသပ်ခြင်း, ultrasound microscopy, ယိုစိမ့်စမ်းသပ်ခြင်း, Eddy လက်ရှိစမ်းသပ်ခြင်း, radiographic နှင့် thermographic စမ်းသပ်ခြင်း။
3. စက်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုစမ်းသပ်ခြင်း: ခွန်အားဖြစ်စမ်းသပ်ခြင်း, အစှမျးသတ်တိနှငျ့ထဲမှာပါတဲ့၏စမ်းသပ်ခြင်း, အပူချိန်မှာအတူတူနည်းပညာနှင့်ကျိုး mechanics ရဲ့စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူလျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိ၏စမ်းသပ်ခြင်း° 0002ကျော်ကို C မှတက်။
4. ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Atom spectrometry, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, မှုန်, X-ray နည်းစနစ်, အိုင်း Chromatography နှင့် thermophysical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းလမ်းများ၏ဓာတုစရိုက်လက္ခဏာတွေ။
5. ချေးစမ်းသပ်ခြင်း: လေထုချေး၏စမ်းသပ်မှု, စိုစွတ်သောချေး, ပျြောအတွက်ချေးပူဓာတ်ငွေ့ချေးနှင့်လြှပျစစျချေး။
သငျသညျအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်း, ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အက ISO 9001 ထားပါတယ်: 2007: အလုပ်အကိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှု BS OHSAS 18001 ဘို့ 2015 နဲ့ Standard: 2015 certification.we လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုက ISO 14001 များအတွက်နျ Standard ရှိသည်။
CPL Kaiyuan ရထားလမ်း Luolong ခရိုင်၊ တရုတ်၊
molybdenum စာရွက်, Tzm Plate , molybdenum ပြား, Tzm Sheet , molybdenum လှံတံ, molybdenum၊